pps12345 December 5, 2012 - 6:57 pm အမေရိကန် တွေက စီးပွားရေး ဥာဏ်ကြီးရှင်တွေ ဖြစ်ကြပါသည်။ တရုတ်နှင့် ဂျပန်တို့ကတော့ အာဏာရှင်များနှင့် ပူးပေါင်းကာ အချောင်ရသမျှကို နှိုက်တတ်ကြပါသည်။ မြန်မာပြည်တွင် အခု အစိုးရ လက်ထက်တွက် ဆရာကြီး လုပ်နေသူ ဂရန်းတိုင်းဂါး ကားများနှင့် ချယ်ရီကားများကို တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်းမရှိပဲ ဈေးကြီးပေးကာ တင်သွင်းခဲ့သူ၊ အစိုးရ စက်ရုံများ တည်ထောင်ရာတွင် ရင်းနှီးသော ကုန်သည်များကို သတင်းကြိုပေးကာ အမြတ်ကို ဆနှင့်ချီ၍ တိုင်းပြည် ဘဏ္ဍာ များကို ဖျောင်ပေးတတ်သူ၊ စာနယ်ဇင်းသမားများနှင့် ရင်းနှီးသူ၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး သမား နာမည်ခံထားသူ၊ တစ်ဦးထဲစားသူ၊ အောက်ခြေကိုဝေမျှ မပေးသူ လာဒ် မစားဘူး ဆိုပြီး နိုင်ငံ တော်ငွေ ကို နိုင်ငံခြား ဘဏ် စာရင်းများသို့ ရွှေ့ပြောင်း တတ်သူ များ တိုင်းပြည်ကို ဦးဆောင်နေသမျှ ကာလပတ်လုံး တိုင်းပြည် ကောင်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ စာနယ်ဇင်းသမား များပါ ရောပေါင်း စီးပွားရေး လုပ်နေသဖြင့် တိုင်းပြည် မှာ လန်ကွတ်တီ ဖြစ်နေပါသည်။ ထို အချိန်တွင် အမေရိကန် ပါ ဝေစားမျှစား လုပ်လိုက်ပါက တိုင်းပြည်ပျက် ကာ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု များ ဆုံးရှုံး သွားစေနိုင်ပါကြောင်း…………………
Reply snow December 5, 2012 - 8:56 pm ခရိုနှီနဲ့လွဲယင်တခြားလူတန်းစားတွေနဲ့အတူပူးပေါင်းမှ
Reply Salai Lian December 5, 2012 - 9:42 pm Some people may think Burma is the apple to all the eyes. It is not. Burma will never impact the US economy nor the lives of Americans. Burmese people may not know most of the Americans do not even know where Burma is. The US companies need to be cautious to make investment in Burma because these companies are not like the Chinese companies. Investment Laws of Burma are not firmly established yet and Wan Bao company is proving that it can beahuge mistake if billions of dollars goes to the wrong investment. Without investing in Burma, the US will be always the US. US does not need Burma at all but the Americans have big hearts for the people of the world. Some people are jealous of the US and always talk about the US in negative ways. US still is heaven on earth because of the political system. We the Burmese people need to learn from the US how to buildafederal Union.
Reply San Win Aung Khin December 5, 2012 - 10:01 pm Investment in Electrical Power, Tele Communication and Internet by US companies are welcome by Myanmar People.
Reply ally December 6, 2012 - 12:37 am ကျောက်ခဲတွေရင်းနှီးမြုပ်နှံရမှုတ်ဘူးလေ။ ဒေါ်လာတွေရင်းနှီ်းမြုပ်နှံရမှာ၊ ဟိုလိုလို၊ဒီလိုလို၊ ကြေငြာချက်ထုပ်လိုက်ပြန်ဖျက်လိုက်နဲ့၊ စစ်တပ်အကျိုးစီးပွား ဦးထိပ်ထားနေတဲ့အစိုးရလက်ထက်မှာရင်းနှီးမြုပ်နှံရမှာလက်တွန့်ကြမှာပါ။
Reply Aung Khin December 6, 2012 - 10:22 am We should atract to invest in tourism industry fist.
Reply မင်းကြီးညို December 8, 2012 - 12:38 am အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေ အလောတကြီး မ၀င်သေးတာက မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြ
Reply pps12345 December 8, 2012 - 9:21 pm ပိုဆိုးတာက MIC ဥက္ကဌ ကြီး နှင့် နီးစပ်တဲ့ ဂရန်းတိုင်း၈ါး၊ ချက်ရီ နှင့် မြင်းခြံစက်မှုစီမံကိန်း များ ကို တစ်ဦးထဲ တင်ဒါ တင်သွင်းခွင့် ရရှိသူ…… အင်တာပရိုက် ပိုင်ရှင်ကြီးပါပဲ။ အခုလည်း သီလဝါ ဆိပ်ကမ်းကို တစ်ဝက်လောက်တောင် ပိုင်နေပြီလား မသိပါဘူး။ မြန်မာပြည်မှာ ဒီလို လောဘကြီးတဲ့လူတွေ အများကြီးပါလား………… စာနယ်ဇင်းတွေနှင့် ပေါင်းပြီး တိုင်းပြည်ကိုဓားပြ တိုက်နေတယ်လို့ဆို နီုင်ပါတယ်။ နောက်ပြည်လှည့်မှာ ဆိုးလို့တဲ့။ ဘာကိုပြောတာပါလဲ။
Reply pps12345 December 8, 2012 - 9:24 pm အော် လောဘ လောဘ ဂရန်း တိုင်းဂါး နှင့် ချယ်ရီ ကားများကို တစ်ဦးထဲ သွင်းခွင့် ရရုံသာမက မြင်းခြံစက်မှု စီမံကိန်းများကို တစ်ဦးထဲ လုပ်ပိုင်ခွင့် ရရှိထားပြီး သီလဝါ ဆိပ်ကမ်းမှာပါ တစ်ဝက်လောက် ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့……. အင်တာပရိုက် ဆိုပါလာ……………လောဘ၊လောဘ